ဆွတ်တန်ခခု - ဝီကီပီးဒီးယား
Tsūtenkaku (通天閣?, lit. "Tower Reaching Heaven")သည် Tsūtenkaku Kanko Co., Ltd. (通天閣観光株式会社, Tsūtenkaku Kankō Kabushiki-gaisha?) ကုမ္ပဏီ လိမိတတ် မှပိုင်ဆိုင်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ၊ အိုဆာကာမြို့၏ အထင်ကရ နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Osaka. Naniwa-ku ခရိုင်၏ Shinsekai တွင်တည်ရှိသည်။ လေ့လာရေးကုန်းပတ်သည် အမြင့် ၉၁ မီတာ တွင်ရှိပြီး စုစုပေါင်းအမြင့်သည် ၁၀၃ မီတာရှိသည်။
Shinsekai Luna Park, ca. ၁၉၁၂
လက်ရှိမျှော်စင်သည် ထိုနေရာတွင် ဒုတိယနေရာယူထားသည်။ အီဖယ်လ် မျှော်စင် နှင့် Arc de Triomphe တို့မှ ပုံစံပြုထားသည့် မူလမျှော်စင်အား ၁၉၁၂ ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ Luna Park နှင့် ကပ်လျက် အပန်းဖြေဥယျာဉ်ကို ဝေဟင် ကေဘယ်ကား ဖြင့် ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ ၎င်းကို တည်ဆောက်စဉ် အမြင့် ၆၄ မီတာသည် အာရှတွင် ဒုတိယအမြင့်ဆုံး တည်ဆောက်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မြို့၏လူကြိုက်အများဆုံး နေရာများထဲမှ တစ်နေရာဖြစ်လာပြီး ဒေသတစ်ခုလုံးမှ ဧည့်သည်များကို ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ မူလတည်ဆောက်ပုံသည် ၁၉၄၃ ခုနှစ်တွင် မီးပြင်းထန်စွာ လောင်ကျွမ်းပျက်စီးခဲ့ပြီး၊ အဆောက်အအုံကို ပြန်လည်ပြုပြင်မည့်အစား ၎င်းကို ဖြိုဖျက်ခဲ့ပြီး သံမဏိကို စစ်ပွဲအတွက် အသုံးပြုခဲ့သည်။
စစ်အပြီးတွင် နိုင်ငံသားများသည် ချစ်မြတ်နိုးရသော မျှော်စင်ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် စည်းရုံးခဲ့ကြသည်။ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Tsūtenkaku Kanko Co. , Ltd နှင့် TachūNaitō ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံရှိ"မျှော်စင်များ၏ ဖမည်းတော်" (Father of Towers) ဒီဇိုင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အဌဂံ ရှစ်မြောင့်ပုံစံ မျှော်စင်သစ်ကို ၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ပဉ္စမအထပ် လေ့လာရေးကုန်းပတ်တွင် ပျော်ရွှင်မှု၏ ဘုရားသခင် သို့မဟုတ် “ သူတို့ ဖြစ်သင့်သည့် အရာများ” (things as they ought to be) ဖြစ်သည့် Billiken ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ၁၉၂၃ ခုနှစ်တွင်ပန်းခြံကို ပိတ်လိုက်သည့်အခါ ဘီလီကန်၏ သစ်သားရုပ်တုသည် ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သည်။ ၁၉၇၉ ခုနှစ် တွင် ထားရှိခဲ့သည့် ဓာတ်ပုံဟောင်းတစ်ပုံမှ ပုံစံတူပြုလုပ်ထားသည့် ဘီလီကန်သည် မျှော်စင် ပြန်လည် အသက်ဝင်လာရန် အားထုတ်မှု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မျှော်စင်နှင့်အတူ ဘီလီကန်ရုပ်တုသည် နှီးနွယ်လာပြီး ကံကောင်းခြင်း၏ ကျော်ကြားသည့်သင်္ကေတတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ နှစ်စဉ် ထောင်နှင့်ချီသော လည်ပတ်သူများသည် အလှူခံပုံးထဲသို့ ဒင်္ဂါးပြားတစ်ပြား ထည့်ကြပြီး ဆုတောင်းများ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာစေရန် ၎င်းခြေထောက်၏ ခြေဖဝါးများကို ပွတ်ပေးကြသည်။
မျှော်စင်သည် ၎င်း၏ နီယွန်မီးများကြောင့် ကျော်ကြားသည်၊ ၎င်းတို့ကို နှစ်အနည်းငယ်ကြာတိုင်း လဲပြီး (ယင်းတို့ကို ၁၉၇၄ - ၇၆ ရေနံအကြပ်အတည်းအတွင်း ပိတ်ထားသည်)။ ယခုအခါ နီယွန်မီးများကို LED မီးဖြင့်အစားထိုးခဲ့ပြီး၊ နှစ်လကြာတိုင်း ကွဲပြားသော အရောင်များကို ပြသပေးသည် (ဥပမာ မတ်လ/ ဧပြီလတွင် ပွင့်သည့် ချယ်ရီအတွက် ပန်းရောင်)။ ၁၉၅၇ ကတည်းက မျှော်စင်ကို Hitachi မှ ကမကထပြုပေးခဲ့သည်။ မျှော်စင်၏ တစ်ဖက်သည် များသောအားဖြင့် အများပြည်သူ ဝန်ဆောင်မှုကြေညာခြင်းဖြင့် သိမ်းပိုက်ထားသော်လည်း အလင်းဒီဇိုင်းများသည် Hitachi ၏ကြော်ငြာများကို ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ မတူညီသော အရောင်များကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် နောက်တနေ့အတွက် ရာသီဥတုကို မျှော်စင်ထိပ်ရှိ မီးအလင်းရောင်မှ ပြသပေးသည်။
မူလ ဆွတ်တန်ခခု မျှော်စင်သည် ၁၉၄၃ခုနှစ်တွင် မီးလောင်ခဲ့သည်။
ပထမ ဆွတ်တန်ခခု မျှော်စင်ကို ဖြိုဖျက်ခြင်း
JR West, Osaka Loop Line and Yamatoji Line, Shin-Imamiya Station, အရှေ့ဘက် ထွက်ပေါက် (၁၀မိနစ် လမ်းလျှာက်)
Nankai Railway, Nankai Main Line and Koya Line, Shin-Imamiya Station, အရှေ့ဘက် ထွက်ပေါက် (၁၀မိနစ် လမ်းလျှာက်)
Osaka Municipal Subway Sakaisuji Line (brown line), အဲဘိဆုချေားဘူတာ၊ ထွက်ပေါက် ၃ (၃ မိနစ် လမ်းလျှောက်)
Osaka Municipal Subway Midosuji Line (red line), ဒိုးဘုဆွတ်အင်း − မအဲဘူတာ၊ ထွက်ပေါက် ၅ (၁၀ မိနစ် လမ်းလျှောက်)
Hankai Tramway, Hankai Line, Ebisucho Station (၃ မိနစ် လမ်းလျှောက်)
↑ Tsūtenkaku။ City of Osaka Recreation and Tourism Bureau။ 17 May 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 June 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Tegler၊ Gary။ "Osaka's spirit in the sky"၊ The Japan Times။ 27 June 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ [လင့်ခ်သေ]
Wikimedia Commons တွင် Tsūtenkaku နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုဒ် (ဂျပန်ဘာသာဖြင့်)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆွတ်တန်ခခု&oldid=699716" မှ ရယူရန်